1. Inona no fampahalalana tokony omena momba ny skid fitsaboana entona voajanahary?
1. Famoronana entona amin'ny antsipiriany: mol%
2. Fikoriana: Nm3/d
3. Inlet tsindry: Psi na MPa
4. Ny mari-pana fidirana: °C
5. Toetran'ny toerana sy ny toetr'andro, toy ny toetry ny toetr'andro (indrindra ny mari-pana amin'ny tontolo iainana, na akaikin'ny ranomasina), famatsiana herinaratra, na misy rivotra fitaovana, rano mangatsiaka (araka ny filana tena izy),
6. Famolavolana sy fanamboarana fehezan-dalàna sy fenitra.
2. Hafiriana ny tsingerin'ny famokarana?
Miankina amin'ny vokatra samihafa izany, matetika 2 hatramin'ny 4 volana.
3. Inona no tolotra azonao omena?
Tsy vitan'ny hoe manamboatra fitaovana isan-karazany araka ny sarinao izahay, fa afaka manome vahaolana amin'ny antsipiriany araka ny fepetra takinao.
4. Ahoana ny momba ny serivisy aorian'ny varotra?
5. Inona ny isan'ny vokatrao?
Manam-pahaizana manokana amin'ny famolavolana, R&D, famokarana, fametrahana ary asa fanompoana isan-karazany amin'ny karazana solika sy entona entona tany wellhead fitsaboana, fanadiovana entona voajanahary, menaka fanosotra, maivana hydrocarbon fanarenana sy ny entona voajanahary liquefaction feno sets ny entona mpamokatra. .
Ny vokatra lehibe dia:
Wellhead fitaovana fitsaboana
Fitaovana fandrefesana entona voajanahary
Sampana fanarenana hydrocarbon maivana
Fitaovan'ny menaka maloto
Mpamorona entona voajanahary